Jawaabaha Caafimaadka ee ku saabsan CBD & Delta 8 THC
Su'aalaha iyo Jawaabaha Caafimaadka ee ku saabsan Delta 8 THC iyo Delta 10 THC oo ka socda Shabakadda
Waa maxay Delta 8 THC?
Waxaa qoray Shishira Sreenivas
Caafimaadka Waxaa Dib -u -eegay Neha Pathak, MD on July 08, 2021
Maqaalka Asal ahaan La Dhajiyay https://www.webmd.com/mental-health/addiction/what-is-delta-8
Sidee Isbarbar Dhigtaa Marijuana Joogta Ah (Delta-9-THC)?
Delta-8 Ma Sharci baa?
Xagee Ka Helaysaa?
Miyaad tijaabin doontaa togan THC?
Delta-8 THC (ama Delta-8-tetrahydrocannabinol) waa kiimiko si dabiici ah u dhacda oo la yiraahdo cannabinoid oo laga helo raadadka yar yar ee geedka hemp iyo xashiishadda (marijuana). Caannimadeeda ayaa sii kordheysa, waxaadna ka heli kartaa meel kasta laga bilaabo dukaamada xashiishka ee dukaamada ah.
Waa maxay sababta ay u badan tahay baahida sii kordhaysa ee Delta-8? Bilowga, qaab dhismeedkiisa kiimikadu wuxuu la mid yahay kii inaadeerkii caanka ahaa, Delta-9-tetrahydrocannabinol (Delta-9-THC), oo ah xarunta ugu weyn ee nafsiyadeed ee laga helo marijuana. Taasi waa waxa kaa dhigaya “mid sarreeya”.
Delta-8 iyo Delta-9 labaduba waa qaababka THC. Laakiin markay dadku tixraacaan THC, waxay caadi ahaan ula jeedaan Delta-9 oo laga helo maroojin aad u badan. Labaduba waxay soo saaraan shucuur, dareen qallafsan, laakiin Delta-8 waxay keentaa mid fudud.
Xaqiiqdii, Delta-8 waxaa badanaa loogu yeeraa "marijuana-lite" ama "haramaha cuntada." Waxyeellooyinka kale ee caadiga ah ee THC sida paranoia, welwelka iyo lulmidda ayaa sidoo kale awood yar.
Delta 8 THC ma sharcibaa?
Sabab kale oo caan u ah sii kordheysa ee Delta-8 ayaa ah, si ka duwan sida aadka loo nidaamiyay THC, Delta-8 waa sharci in laga isticmaalo gobolada badankood. Taasi waa sababta oo ah waxaa laga soosaaray badiyaa CBD-hemp-hemp, kaas oo sharci ah in lagu beero Mareykanka oo dhan
Laakiin Delta-8 waxay ku fadhidaa goob cawlan oo sharci ah. Sharciga hemp wuxuu ka yimid waxa loogu yeero biilka beeraha ee federaalka (Sharciga Horumarinta Beeraha iyo Nafaqada ee 2018), kaas oo ka saaray hemp iyo waxsoosaarkeeda liiska walxaha la kontoroolo. Sababta: Heerarka THC ee hooseeya (in ka yar 0.3%). Biilku meelna kuma xuso Delta-8. U doodayaasha hemp iyo kuwa kale ee iibiya waxay u adeegsadeen daldalooladaan inay si sharci ah u suuqgeeyaan alaabada Delta-8, badanaaba aan lahayn xannibaadyo da '. Natiijo ahaan, hadda waa badeecadda ugu dhaqsaha badan ee ka soo baxda warshadaha hemp. Waxaad ka hubin kartaa xaaladda sharci ee gobolkaaga halkan: https://redemperorcbd.com/is-delta-8-thc-legal-in-my-state/
Sababtoo ah waxaa jira kormeer yar ama baaritaan shaybaar oo ku saabsan waxa gala badeecadaha Delta-8, farmashiistayaasha iyo saynisyahannada kale ayaa qaba walaac xagga amniga ah. Alaabooyinka lagu tilmaamay Delta-8 waxaa ku jiri kara wasakh, oo ay ku jiraan heerar sare THC. Sidaas darteed, ku dhawaad ​​darsin gobol, oo ay ku jiraan New York iyo Co.
Waad iibsan kartaa Delta 8 THC alaabooyinka miiska laga soo iibsado saldhigyada gaaska, dukaamada ku habboon, haramaha, iyo dukaamada vape, iyo internetka. Waxaa loo iibiyaa sida cirridka, nacnaca, Delta 8 gulufyadii vape, saliidaha, tinctures -ka, cuntooyinka, kala -goysyada, ama cabbitaannada.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in aysan jirin xakamayn tayada alaabtan iyo liistadooda maaddooyinka Waxa kale oo ay fududahay in lagu wareero badeecadaha Delta-8 ee CBD, taas oo aan keenin sare.
Delta 8 Gummies 59.99 Iibinta 39.99 Guji Sawirka si aad u dalbato 14-maalmood dammaanad-celin lacag-celin ah.
Waxa kale oo jira cilmi-baaris la'aan iyo caddayn marka ay timaaddo saamaynta Delta-8 ee caafimaadkaaga guud. Dad badan ayaa soo sheegay-badiyaa iyagoo adeegsanaya farriimaha warbaahinta bulshada-in ay isticmaalaan Delta-8 oo ay weheliyaan daawooyinkooda dhakhtarku qoray si ay uga caawiyaan niyad-jabka iyo isticmaalka maandooriyaha. Isticmaalayaasha ayaa sheegaya in Delta-8 sidoo kale ay:
Rabitaanka rabitaanka cuntada
Iska yaree xanuunka
Kor u qaad caafimaadka maskaxda
Ka hortag matag inta lagu jiro daaweynta kansarka
Si kastaba ha ahaatee, khubaradu waxay leeyihiin faa'iidooyinkani inta badan waa afka oo waxaa jira cilmi -baaris la'aan ku saabsan sida ay u saamayso caafimaadkaaga. Sababtoo ah waxaad ka iibsan kartaa khaanadaha micnaheedu maahan inaysan gebi ahaanba khatar lahayn.
Dadka qaar ayaa soo sheegay waxyeellooyin sida:
Garaaca wadnaha oo gaabiya (bradycardia)
Heerka garaaca wadnaha oo degdeg ah (tachycardia)
Haddii aad tijaabiso badeecadaha Delta-8 oo aad aragto mid ka mid ah falcelintaan, isla markiiba u sheeg dhakhtarkaaga. Haddii ay tahay xaalad degdeg ah, wac 911 ama u tag isbitaal kuu dhow. Haddii ilmuhu wax cuno ama la kulmo badeecadaha Delta-8, sida cirridka ama nacnaca, hel daryeel caafimaad oo degdeg ah.
Waxay ku xiran tahay. Delta-8 waa nooc ka mid ah THC. Tijaabooyinka daroogada ayaa inta badan raadiya raadadka Delta-9, laakiin Delta-8 ayaa laga yaabaa inay u muuqato THC mid wanaagsan. Hadday tahay Delta-8 ama Delta-9, dadku sidoo kale si ka duwan ayay uga falceliyaan cannabinoids waxay kuxirantahay nooca alaabada ay adeegsadaan iyo inta ay u isticmaalaan.
Waqtigan xaadirka ah, tijaabooyinka daroogada kaadida ganacsiga ma kala soocaan cannabinoids kala duwan. Markaa haddii tijaabo daroogo soo socoto, waxaa fiican inaad iska ilaaliso badeecadaha Delta-8.
Tixraaca Caafimaadka WebMD
Jawaabaha Caafimaadka ee Websaydka Ku Saabsan CBD
markii hore lagu dhajiyay. https://collegian.csufresno.edu/2020/10/8-common-questions-and-answers-about-cbd-and-medical-marijuana/#.YSV07vpKg2w
Iyada oo xashiishka madadaalada iyo caafimaadka ay si isa soo taraysa ugu noqonayaan sharci dawladaha dalka oo dhan, waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso haddii iyo goorta gobolkaagu ku xigi doono. Iyada oo wada sheekaysiga ku saabsan marijuana uu sii kordhayo sanadihii la soo dhaafay, dadku waxay sidoo kale jilciyeen mowqifkooda ku aaddan hemp iyo mid ka mid ah kuwa ugu caansan cannabinoids - cannabidiol (CBD).
Iyada oo caafimaadka guud uu noqonayo mid sii kordhaya oo caan ah iyo dhaqanka xashiishadda oo ku baahay boqortooyada caanka ah, waxaa jira su'aalo badan oo ku wareegsan meesha cannabis ee bulshada Mareykanka. Sii wad akhrinta si aad u hesho jawaabaha qaar ka mid ah su'aalaha caadiga ah ee dadku ka qabaan marijuana caafimaad iyo alaabada CBD.
Mid ka mid ah su'aalaha ugu badan ee ku dhex socda maskaxda dadka waa "Waa maxay CBD?" Dadka aan aqoon u lahayn oo kaliya og inay ka timaaddo xashiishadda waxay inta badan ku wareeraan tetrahydrocannabinol (THC), oo ah soo -kicinta sare ee cannabinoid ee laga helo marijuana.
Su'aasha ugu weyn ee maskaxda dadka ku saabsan waxyaabaha CBD waa haddii ay sare kuu qaadi doonaan iyo in kale. Jawaabta fudud ee tan waa maya. In kasta oo ay tahay cannabinoid, haddana kuma dareensiiso inaad sare u kacdo sida cawsku sameeyo. Xaqiiqdii, waxay dhab ahaantii ka hortagtaa THC.
Xashiishadda ma sharci baa heer federaal?
Shantii sano ee la soo dhaafay, waxaa jiray gobollo badan oo sharciyeeyay marijuana si loogu isticmaalo caafimaad iyo madadaalo. Isbeddelkan xagga aragtida haramaha ayaa dad badan oo xiiseeya xashiishadda rajo ka qabay in haramaha loo sharciyeyn doono heer federaal, laakiin taasi weli ma dhicin.
In kasta oo gobollo badan ay sharciyeeyeen marijuana caafimaad iyo sidoo kale marijuana madadaalo, weli waa sharci darro heerka federaalka. Sababtaas awgeed, ganacsato badan oo ku nool gobollada ay marijuana sharci ka tahay ayaa ka gaabsaday inay galaan ganacsiga canna.
CBD maxay qabataa?
In kasta oo ay jirtay guux badan, haddana waxaa jira dad badan oo aan ka warqabin faa'iidooyinka caafimaad ee isticmaalka CBD. Cannabidiol waxaa loo isticmaalaa xanuuno badan sida xanuun joogto ah iyo madax xanuun. Dadku sidoo kale waxay u isticmaalaan kiriimyada la mariyo ee cudurka psoriasis iyo cambaarta maxaa yeelay waxay ka caawisaa bararka. Khubarada qaar ayaa xitaa aaminsan inay daaweyn wax ku ool ah u noqon karto niyad -jabka iyo welwelka.
Sidee u qaadataa alaabta CBD?
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo qaato kaabitaankan. In kasta oo aysan kor kuugu qaadin sida cawsku u samayso, dadka qaarkood waxay doortaan inay u cabbaan si ay ula tacaalaan walaaca. Dhibcaha CBD waxay caan ku yihiin dadka u adeegsada daaweynta arthritis -ka iyo xanuunka daba -dheeraada. Dadka qaar ayaa xitaa u adeegsada sidii qayb ka mid ah karinta iyaga oo beddel u ah khudradda iyo saliidda lawska. Waxaad sidoo kale u heli kartaa kabitaankan tincture ama salve la mariyo.
4. Medicare ma daboolayaa alaabta CBD?
Su'aal kale oo caadi ah oo dadku qabaan ayaa ah "Medicare ma daboolayaa marijuana caafimaad?" Sidaad hore u akhriday, marijuana weli waa sharci -darro heer federaal iyo sababta oo ah Medicare waa ikhtiyaarka caymiska dadweynaha, ma daboolayo marijuana caafimaad.
Si daacadnimo ah, waxaa laga yaabaa inaad dhibaato kala kulanto helitaanka bixiye caymis oo dabooli doona dawadaada marijuana. Sababtoo ah dhaleeceynta ku xeeran isticmaalka marijuana, waxay u badan tahay inay noqon doonto muddo ka hor inta shirkadaha caymisku aysan ku dhiirran inay halkaas tagaan. Sidaa darteed, tixgeli qiimaha jeebka ka baxsan ka hor intaadan isticmaalin wax marijuana caafimaad ah ama alaabada CBD ah.
5. Maxaa loo qoraa xashiishadda caafimaadka?
In kasta oo xaqiiqda ah in isticmaalka marijuana ay dadka qaar ka xanaaqaan, haddana waxaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo liis dheer oo xanuunno ah, qaar jidheed iyo xoogaa maskaxeed. Dhakhaatiirtu waxay u isticmaalaan in lagu daweeyo cudurka dhimirka ee xaqiiqada looga baxo, kansarka, lumitaanka rabitaanka cuntada, hurdo la’aanta, suuxdinta, muruqyada oo dillaaca, iyo maareynta xanuunka.
Broad Spectrum CBD 79.99 oo lagu iibiyo 49.99
Miyaan awoodi doonaa inaan shaqo helo haddii aan isticmaalo xashiishadda caafimaadka?
Walaaca weyn ee bukaanada ku jira xashiishadda caafimaadka ayaa ah inay saamayn ku yeelanayso u -qalmitaankooda shaqo iyo in kale. Meheradaha waxaa loo oggol yahay inay tijaabiyaan oo ay dadka u qalmaan inay ka shaqeeyaan isticmaalka marijuana, xitaa marijuana caafimaad. Haddii aad guriga ku isticmaaleyso xashiishka caafimaadka, markaa waxa ugu fiican ee aad sameyn karto marna ha imaanin meel sare ama ha u oggolaan inaad isticmaasho marijuana.
CBD ma leedahay oggolaanshaha FDA sidii daaweyn?
Badeecadaha CBD weli ma aysan tijaabin FDA si loogu daaweeyo xanuun kasta ama jirro. Taas micnaheedu maahan in CBD aysan waxtar lahayn - kaliya waxay ka dhigan tahay in dadka aan loo oggolaan inay sameeyaan sheegashooyin caafimaad oo ku saabsan awoodda ay u leeyihiin inay ogaadaan ama daweeyaan cudurro kasta. In kasta oo aad si sahal ah uga iibsan karto CBD, waa inaad weli la tashataa takhtarkaaga ka hor intaadan u isticmaalin xanuun ama arrimo kale oo caafimaad.
Saliidda CBD ma u fiican tahay maqaarka?
Markii hore lagu dhajiyay https://www.medicalnewstoday.com/articles/cbd-oil-for-skin
Cannabidiol (CBD) waa isku dhaf dabiici ah oo laga soo qaatay geedka xashiishadda. Caddaymaha qaarkood waxay soo jeedinayaan in saliidda CBD laga yaabo inay faa'iido u leedahay caafimaadka maqaarka waxaana loo adeegsaday xaalado kala duwan oo maqaarka ah.
CBD waa isku -dar kiimiko ah oo ku jira Cannabis Sativa warshad. Soo -saareyaashu waxay isku dari karaan CBD saliid, sida hemp ama saliidda qumbaha, si loo abuuro saliidda CBD. Dadku waxay iibsan karaan saliidda CBD ama alaabooyin qurux badan oo ku daraya saliidda CBD si loogu isticmaalo maqaarkooda.
Sababtoo ah sifooyinka ka-hortagga bararka, CBD ayaa laga yaabaa inay waxtar u leedahay daaweynta xaalado badan oo maqaarka ah, oo ay ku jiraan finan, cambaar, iyo cudurka psoriasis.
Maqaalkan, waxaan kaga hadli doonnaa waxa saliidda CBD tahay, xaaladaha maqaarka ee laga yaabo inay waxtar u leedahay, iyo sida loo isticmaalo saliidda CBD.
CBD sharci ma tahay? Badeecooyinka CBD ee hemp-ka leh oo ka yar 0.3% THC waa sharci ahaan federaal ahaan laakiin weli waa sharci-darro sharciyada gobolka qaarkood. Waxsoosaarka CBD ee xashiishadda laga soo saaray, dhanka kale, waa sharci darro federaal ahaan laakiin waa sharci marka loo eego qawaaniinta gobolka qaarkood. Fiiri sharciyada deegaanka, gaar ahaan markaad safrayso. Sidoo kale, maskaxda ku hay in Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA) uusan oggolaan badeecadaha CBD ee aan qorin, oo laga yaabo in si aan sax ahayn loo calaamadeeyay.
CBD waa mid ka mid ah cannabinoids badan oo laga helo warshadda xashiishadda. Mid kale oo caan ah cannabinoid waa delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). THC waa xarunta mas'uulka ka ah "sare" ee ay dadku la xiriiri karaan xashiishadda. CBD kaligeed ma keeni doonto in qofku dareemo sare.
Baro wax badan oo ku saabsan farqiga u dhexeeya CBD iyo THC halkan.
Noocyada kala duwan ee dhirta xashiishadda waxaa ku jira heerar kala duwan oo ah cannabinoids. Caadi ahaan, dhirta hemp waxaa ku jira CBD aad uga badan oo aan lahayn THC, taasina waa sababta inta badan saliidda CBD ay uga timaaddo hemp warshadaha.
Baro wax badan oo ku saabsan farqiga u dhexeeya hemp CBD iyo cannabis CBD halkan.
Caadi ahaan, soo -saareyaashu waxay u adeegsan doonaan kuleyl si ay CBD uga soo saaraan warshadda xashiishadda oo ay ku qasaan saliid side si ay u soo saaraan saliidda CBD. Qaar kale waxay isticmaali karaan khamri si ay u abuuraan a Tincture CBD.
Saliidda CBD waxay ku timaadaa dhinacyo badan oo kala duwan, dadkuna siyaabo badan oo kala duwan ayay uga faa'iidaysan karaan. Tusaale ahaan, waxay si toos ah ugu marsan karaan maqaarka, dhibic carrabkooda hoosteeda gelin karaan, ama ku dari karaan kiriimyada ama kiriimyada.
Jirka bini'aadamka waxaa ku jira shabakad kakan oo ah neurotransmitters iyo receptors cannabinoid oo loo yaqaan nidaamka soo dhoweynta endocannabinoid (ECS)Source aamin. Cilmi -baaristu waxay soo jeedinaysaa in cannabinoids iyo ECS laga yaabo inay door ku yeeshaan geedi socodyo badan oo jirka ah iyo in maqaarku ka kooban yahay kalsooni source qaatayaasha cannabinoid.
Ma u shaqeeyaa maqaarka?
ResearchSource aamin waxay soo jeedinaysaa in saliidda CBD laga yaabo inay faa'iido u leedahay dhowr xaaladood oo maqaarka ah oo kala duwan. Kuwaas waxaa ka mid noqon kara:
Finanka waa xaaladda maqaarka ugu caansan ee la aamino source dadka dhexdiisa. CBD waxay ka kooban tahay xeryo badan oo leh saliid-yaraynta, ka-hortagga bararka, iyo astaamaha jeermiska oo laga yaabo inay gacan ka geystaan ​​hagaajinta finanka.
Daraasad 2014 la aaminay source sahamiyay saamaynta CBD ku leedahay sebocytes -ka aadanaha. Kuwani waa unugyada abuura sebum, taas oo ah wax -dhuuban, walax dufan leh oo maqaarku soo saaro.
In kasta oo sebum -ku uu gacan ka geysto ilaalinta maqaarkeenna, sebum -ka xad -dhaafka ah ayaa sidoo kale keeni kara finan. Daraasadu waxay tilmaamaysaa in CBD ay ka hortagi karto sebocytes inay abuurto sebum aad u badan.
Dib -u -eegid 2016 ayaa lagu kalsoon yahay source wuxuu xusayaa sifooyinka bakteeriyada iyo antifungal ee warshadda xashiishadda. Tani waxay kaa caawin kartaa kahortagga finanka sababtoo ah caabuqyada maqaarka.
Daraasad 2019 ah ayaa soo jeedineysa in CBD ay sidoo kale faa'iido u yeelan karto daaweynta muuqaalka nabarrada finanka.
Baro wax badan oo ku saabsan CBD iyo finanka halkan.
Qallal iyo cuncun
A 2019 daraasad lagu kalsoon yahay source waxay xustay in CBD laga yaabo inay waxtar u leedahay daaweynta qaar ka mid ah astaamaha caadiga ah ee xaaladaha maqaarka, sida qalleyl iyo cuncun. Guryaha lidka-bararka ayaa lagu kalsoon yahay source CBD waxaa laga yaabaa inay si gaar ah waxtar ugu leedahay yareynta waxyaabaha kiciya cambaarta, dermatitis, iyo psoriasis.
Maaddaama saliidda CBD ay kaa caawin karto dejinta maqaarka iyo yareynta muuqaalka cuncunka, waxaa laga yaabaa inay waxtar u leedahay dadka maqaarka xasaasiga ah leh.
Baro wax badan oo ku saabsan CBD iyo cudurka psoriasis halkan.
CBD -da Waayeelka iyo laalaabyada
Daraasad 2017 la aaminay source wuxuu muujinayaa sifooyinka antioxidant -ka ee CBD. murqo-Source aamin wax ku biirin kara geedi socodka gabowga. Sidaa darteed, astaamaha antioxidant-ka iyo anti-bararka ayaa lagu kalsoon yahay source CBD waxay kaa caawin kartaa kahortagga muuqaalka gabowga maqaarka.
Kareemka Gabowga ee CBD
Maadaama warshadda xashiishadda ay ku jiri karto aaminaad source guryaha bakteeriyada iyo antifungal, waxaa laga yaabaa inay waxtar u leedahay daaweynta caabuqyada maqaarka.
Wixii macluumaad dheeri ah iyo ilo ku saabsan CBD iyo CBD alaabta daryeelka maqaarka, fadlan booqo xarunteenna go'an.
Sida laga soo xigtay Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO)Source aamin, dadku guud ahaan si fiican bay ugu dulqaataan CBD. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah waxyeelooyinka caadiga ah ee CBD, oo laga yaabo inay ku xirnaato qiyaasta, waxaa ku jiri kara aaminaad source:
isbedelka rabitaanka cuntada iyo miisaanka
Waxa kale oo xusid mudan in CBD laga yaabo inay la falgasho Source aamin daawooyinka qaarkood, sidaa darteed waxaa muhiim ah in dadka hadda qaata dawooyinka dhakhtarku qoro ay la hadlaan dhakhtarkooda ka hor intaanay isticmaalin wax alaab CBD ah.
Badeecad kasta oo CBD ah, waxaa muhiim ah in la raaco tilmaamaha ku qoran sumadda iyo baakadaha si loo go'aamiyo inta jeer ee la isticmaalo alaabta, inta la isticmaalo, iyo sida loo adeegsado.
Dadku waxay si toos ah maqaarka ugu marsiin karaan saliidda CBD iyo waxyaabaha quruxda badan ee ay ku jiraan saliidda CBD.
Baro wax badan oo ku saabsan mawduucyada CBD halkan.
Si aad afka ugu qaadato saliidda CBD, dadku waxay ku ridi karaan dhawr dhibcood carrabkooda hoostiisa, halkaas oo ay saliidda ku hayn karaan ilaa 1 daqiiqo ka hor intaadan liqin.
Qiyaasta way kala duwanaan doontaa iyadoo ku xiran culeyska jirka qofka iyo awoodda saliidda CBD. Dadka ku cusub CBD waa inay ku bilaabaan qiyaasta ugu hooseysa ee suurtogalka ah. Markay ogaadaan sida jidhkoodu ula falgalo CBD, waxay si tartiib tartiib ah u kordhin karaan qiyaasta.
Akhri wax badan oo ku saabsan qiyaasaha saxda ah ee CBD halkan.
Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA)Source aamin hadda ma nidaaminayo alaabada CBD. Sidaa darteed, waxaan ku talinaynaa in dadku raadiyaan badeecooyinka saliidda CBD ee:
kuma jiraan wax ka badan 0.3%Source aamin THC, sida ku cad Xeerka Horumarinta BeerahaSource aamin
haystaan ​​caddeyn tijaabin dhinac saddexaad ah oo ay leedahay ISO/IEC 17025 shaybaar la aqoonsan yahay
gudub tijaabooyinka cayayaanka, biraha culus, caaryada, iyo microbes
gudub qiimeynta awoodda wax soo saarka iyo imtixaanka badbaadada
aan ka soo jeedin shirkad ku hoos jirta warqadda digniinta FDA ee la aamminsan yahay source
waxay ka socdaan shirkad siisa shahaadooyinka falanqaynta (COAs) dhammaan alaabadooda
Intaa waxaa dheer, dadku waxay kaloo tixgelin karaan:
tafaariiqlaha iyo sumcadda soo -saaraha
Daawooyinka kale ee maqaarka ee dabiiciga ah
Daawooyinka kale ee maqaarka ee dabiiciga ah oo laga yaabo inay ka faa'iideystaan ​​caafimaadka maqaarka ama yareeya astaamaha xaaladaha maqaarka waxaa ka mid ah:
Aloe vera waa huuriye aad u fiican waxayna leedahay kahortag barar, jeermis dilaha, iyo bogsashada nabarka. Daraasado laga soo bilaabo 2014 iyo 2017 waxay soo jeedinayaan in aloe vera ay yareyn karto astaamaha finanka iyo cudurka psoriasis.
Dib -u -eegid 2012 ayaa lagu kalsoon yahay source waxay xustay in malabku muujiyey huurka, bogsashada, iyo kahortagga bararka. Dib -u -eegista 2016 waxay soo jeedinaysaa inay sidoo kale kor u qaadi karto nidaamka difaaca, halka dib -u -eegista 2017 la aamminsan yahay source waxay tilmaamaysaa in malabku daaweyn karo gubashada iyo nabarrada.
Maqaal 2016Source aamin wuxuu sharxayaa in saliidda qumbaha ay tahay daaweyn wax ku ool u ah maqaarka qalalan, maadaama ay si weyn u hagaajin karto fuuq -baxa maqaarka. Daraasad 2019 ayaa sidoo kale xustay in saliidda qumbaha laga yaabo inay ilaaliso maqaarka iyadoo la dagaallameysa bararka iyo hagaajinta caafimaadka xannibaadda maqaarka.
Dib -u -eegid 2013 ayaa lagu kalsoon yahay source tilmaamaa anti-bararka, bakteeriyada, iyo sifooyinka bogsashada ee saliidda geedka shaaha. Dib -u -eegid 2015 ayaa xustay in saliidda geedka shaaha ay tahay daaweyn wax ku ool u ah finanka, yaraynta tirada nabarrada finanka ee dadka qaba finanka fudud ilaa dhexdhexaad ah.
Cilmi -baaristu waxay soo jeedinaysaa in saliidda CBD laga yaabo in loo isticmaalay daaweyn xaalado kala duwan oo maqaarka ah, sida finanka, dermatitis, iyo psoriasis. Tani waxay sabab u tahay suurtagalnimada ka-hortagga bararka, bakteeriyada, iyo astaamaha antioxidant.
Dadku waxay si toos ah ugu marsan karaan saliidda CBD maqaarkooda, way baabbi'i karaan, ama waxay isticmaali karaan waxyaabaha quruxda badan ee la mariyo, sida kiriimyada ama kiriimyada, ay ku jiraan saliidda CBD.
* Weedhahan ma qiimayn Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka. Alaabooyinkaan looguma talagalin in lagu baaro, daweeyo, lagu daweeyo ama looga hortago cudur kasta.
Jawaabaha Caafimaadka ee ku saabsan Delta 8 THC iyo Delta 10 THC Intarneedka